Dome RTA Ankorondrano :: Efa tonga ireo vahiny mpandray anjara amin’ny « Ambony Ambany 2019 » • AoRaha
Miha goavana hatrany ny hetsika ho an’ny dihy an-tanàn-dehibe « Ambony Ambany », izay hotanterahina etsy amin’ny Dôme Rta, Ankorondrano amin’ny 19 oktobra ho avy izao. Mpandihy manodidina ny dimampolo no nasaina avy any ampitan-dranomasina, roanjato kosa ireo avy eto Madagasikara ka voasolo tena avokoa Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Antananarivo.
Nifarana tamin’ny 30 okto­bra teo ny fandraisana anjara rehetra ary efa anatin’ny famaranana ny fanomanana rehetra ireo mpikarakara. Hisy ny fifaninanana samihafa, ny fifampizarana trai­kefa ary ny fampialana voly an’ireo tonga manatrika.
Fantatra ankehitriny fa namaly ny antso ireo mpandihy avy any ivelany. Isan’ny ho hita an-tsehatra ry Snake ao amin’ny tarika « Popping » sy Fanny avy ao amin’ny tarika « All Style » samy avy any Kamerona, Katerina avy ao amin’ny tarika « Waacking » sy Kim avy ao amin’ny tarika « Breaking », avy any Belzika, Florian ao amin’ny tarika « Opera Singer » avy any Alemana ary Nicolas avy ao amin’ny « Afro contemporary », avy any Congo. Hanampy amin’ny fanolorana mozika miavaka ihany koa ry Tambour Gasy, avy eto Madagasikara, Pelagie sy Calvin avy any Kamerona, ary Michael avy any Alemana.Miha matihanina hatrany ny mpandray anjara. Samy hitondra ny aingam-panahiny avy ireo mpandray anjara eny an-tsehatra.
amin’ireo mpanakanto malagasy ireo vahiny hahafahan’ ny tsirairay mivoatra eo amin’ ny karazan-dihy izay ataony. Hampifaly ireo avy eny amin’ny sekoly fampianarana dihy kosa ny fifaninanana « Show » ny « All Style “Ambony Ambany” 2vs2 », « Experimental 1vs1 », « 7 To Smoke Ambony » ary ny « 7 To Smoke Ambany ». Miha avo lenta hatrany noho izany ny fihaonana.
Zavakanto an-tanàn-dehibe :: Ambohipihaonan’ny kanto marolafy ny “Attent’Art”